पाेखरा २० कात्तिक- बच्चाहरुको टुट्ने दुधे दाँत सँगालेर राखे भविष्यमा धेरै लाभदायी हुन सक्ने देखाएको छ । उक्त अध्ययनमा सानोमा टुट्ने दाँतमा भएको ‘स्टेम सेल’ ले क्यान्सर र मुटुसम्बन्धी रोगको उपचार हुन सक्छ भन्ने देखाएको हो ।
बालबालिकाले गुलिया खाद्यवस्तु मन पराउने भएकाले उनीहरूको दाँत बिग्रिने सम्भावना अरुको तुलनामा बढी हुने ग्रान्डी अस्पतालका डेन्टल सर्जन अमित खनाल बताउँछन् । गुलिया मिठाइ अत्यधिक सेवन गर्ने तर त्यसअनुसार सफाइमा ध्यान नदिने कारण दाँत बिग्रिने समस्या बालबालिकामा बढी हुन्छ । राति सुत्दा बच्चालाई बोतलको दूध चुसाइरहँदा पनि बच्चाको दाँत किराले खाने डा. खनालको भनाइ छ ।
दाँतमा रहेको स्टेम सेल को खोज र त्यसमाथि गरिएको शोधकार्य अहिले प्रारम्भिक चरण रहेको छ । भविष्यमा यसको मदतले क्यान्सरको उपचारका साथै हृदयघात कम गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ । त्यसैगरी दाँतमा पाइने स्टेम सेलले हाडको, आँखाको तन्तु निर्माण गर्न सक्छ । यो स्टेम सेल १० वर्षको बच्चाको दाँतबाट पाइन्छ ।
बालबालिकामा दाँतको समस्या व्यस्त जीवनशैलीका कारण अभिभावकले छोराछोरीलाई प्रशस्त समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् । छोराछोरीलाई स्कुलमा टिफिन पठाउँदा होस् वा रोएको बेला फकाउँदा, गुलिया मिठाइको लोभ देखाइन्छ । आफन्तले पनि घरमा आउँदा बच्चाहरूका लागि आइसक्रिम, क्यान्डीलगायत गुलिया मिठाइ ल्याइदिन्छन् ।
यसरी लामो समयसम्म दाँतमा अड्केका गुलिया एवं अन्य खानेकुरा केही समयपछि कुहिएर मुखमा अम्ल उत्पन्न हुन्छ, जसले दातँको टल्किने भाग इनामेल र त्यसको डेन्टिनको ह्रास गराउँछ । त्यसपछि विस्तारै अझ भित्री तहसम्म पुगेर अम्लले क्षति पु¥याउँछ । यस्ता खानेकुरा खानासाथ मुख सफा नगर्नाले बालबालिकाको दाँतमा सडनको समस्या देखा पर्छ । डा. खनालका अनुसार दन्तसडन भनेको दाँतमा अड्किएर बसेको खाना अम्लमा परिवर्तन भई दाँतलाई खाल्डो पार्ने प्रक्रिया हो ।
दन्तसडन भएको खण्डमा सुरुमा दाँतमा कालो खाल्डोजस्तो देखा पर्छ र विस्तारै असर बढ्दै जान्छ । खाल्डो परेको दाँतमा खानेकुरा परेमा अड्किने, सिरिङ हुने र खाना टोक्दा दुख्ने हुन्छ । लामो समयसम्म उपचार नभए खाल्डो बढ्दै जरासम्म पुग्छ । त्यसपछि दाँतको दुखाइ बढ्न थाल्छ । पिप जम्मा हुने, गिँजा सुन्निने र दाँतबाट रगत बग्ने हँुदै दात हल्लिने समस्या पनि आउँछ । कार्बनयुक्त पेय पदार्थहरू गुलिया खाना, चकलेट, चाउचाउ, बिस्कुट, जङ्क फुड, चुसेर खाने (क्यान्डी, ललिपप) आदिले दाँत छिटो बिग्रिन्छ ।
दन्तरोग विशेषज्ञहरू यस्ता समस्या सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण भेगका बालबालिकामा पनि उत्ति नै पाइने गरेको बताउँछन् । दाँतको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दा बालबालिकामा रक्तअल्पता र कुपोषणसमेत हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । दाँतमा हुने पीडाले उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर असर पर्छ । डा. खनालका अनुसार सानो उमेरमा दाँतको उचित स्याहार नगर्दा अनुहारको आकार नै बिग्रिन सक्ने हुन्छ । उचित समयमा फुकाल्नुपर्ने दूधे दाँत किरा लागेर पहिल्यै झरेमा निकै समयपछि मात्र नयाँ दाँत उम्रिने हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नियमित रूपमा दाँत माझ्ने गरेमा ७० प्रतिशतसम्म रोगबाट बचाउन सकिन्छ । खाना खाएपछि दिनको २ पटक अनिवार्य रूपमा दाँत माझ्ने र बेला बेलामा जँचाउने गर्नुपर्छ । वर्षको एक पटक दन्त चिकित्सकसँग नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ । दन्त स्वास्थ्यका विषयमा बालबालिकालाई सही जानकारी दिनु आवश्यक छ, जसले गर्दा उनीहरू स्वयं दा“तको सफाइमा ध्यान दिन सकुन् ।